किन दुख्छ टाउको ? यसरी गर्नुहोस उपचार – Hamro24News
July 19, 2021 adminLeaveaComment on किन दुख्छ टाउको ? यसरी गर्नुहोस उपचार
काठमाडौँ । आम मानिसमो एउटा साझा स्वास्थ्य समस्या हो, टाउको दुख्ने । यो एकै कारण वा एकै प्रकृति वा एकनासको हुँदै। चर्को घाममा बस्दा, अनिँदो, चिसो वा यात्राका कारणले पनि टाउको दुख्ने हुन्छ ।
१. पिनास (साइनस)
टाउकोको अग्र भाग तथा अनुहारमा पीडा हुने टाउको दुखेमा पिनास कारक हुने गर्दछ । यो टाउकोमा पिनास भरिएपछि वा आँखा, नाक तथा गालाको पछिल्तिर रहेको पिनासको नलीमा अवरोध सिर्जना हुदाँ उक्त नलीमा सुन्निन गई टाउकोमा अधिक पीडा हुने गर्दछ । बिहानीको समयमा र टाउको अगाडी, पछाडी लादाँ यो पीडा अधिक हुन्छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
यस प्रकारको टाउनको दुखाईबाट बच्न अत्याधिक मात्रामा तातो पानीको सेवन गर्नु पर्दछ ।
तातो पानीको सेवनले टाउकोमा जमेको पिनासलाई पगाल्न मद्दत गर्छ र सुन्निएको कम गर्नुका साथै पिनास खुलाउँछ ।
हरियो तरकारी मध्ये सबैभन्दा बढी फाइदाजनक हुन्छ कर्कलोको पात
अहिले अधिकाशं मानिसको टाउको दुख्नुको प्रमुख कारण हो, तनाव । अनिन्द्रा, गलत खानपान, तनाव पूर्ण वातावरण, मदिराको सेवनले पनि यस प्रकारको टाउको दुखाईलाई बढाउने गर्दछ । यो सम्पूर्ण टाउको वा टाउकोबाट सुरु भएको पीडा गर्दन वा कुमतिर सर्दै जान्छ । तनावका कारण टाउको दुखेमा आँखाको माथि वा टाउको पछाडिको भागमा निरन्तर घोचेजस्तो महसुस हुने गर्छ । त्यस्तै, मांसपेशी जकडिएको महसुस हुने गर्छ ।
अदुवाको चियाको सेवन वा पर्याप्त निद्राले पनि शरीरलाई तनावबाट मुक्ती दिलाउँछ । त्यस्तै, टाउको ठन्डा राख्ने विभिन्न आरामदायी तेलको प्रयाग गरेमा यस प्रकारको टाउको दुखाईबाट आराम मिल्दछ ।
टाउकाको एउटा भाग लगातार दुख्ने र उक्त दुखाई एक महिना वा त्यस भन्दा बढि समयसम्म लम्बिएमा यसलाई क्लस्टर भनिन्छ । यो महिलाको तुलनामा पुरुषलाई ४ गुणा बढी हुन्छ । क्लस्टर टाउको दुखाई भएमा टाउकोमा अत्याधिक मात्रामा पीडा हुन थाल्दछ ।
यस किसिमको पीडा भएमा चिकित्सकको परामर्श लिनु पर्दछ ।
माइग्रेनको दुखाई मस्तिष्कमा हुने रक्त नली सुन्निदा हुने गर्दछ । यो पीडा जुनसुकै कारणले पनि हुनसक्छ । जस्तै, उज्यालो बत्ती, दुर्गन्ध, चर्को आवाज, पेय पदार्थको अत्याधिक सेवन ।
सामान्यतयाः माइग्रेनको पीडा २५ देखि ५५ वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई बढी हुन्छ । यो पीडा एउटा आँखामा मात्र सिमित हुने गर्दछ ।
यो दुखाई अचानक सुरु हुन्छ र टाउकोको एउटा भागमा मात्र रहन सक्छ । माइग्रेन पेन हुदाँ आँखामा आसु भरिने, नाकबाट सिँगान बग्ने वा नाक बन्द हुने लगायतका लक्षण देखिन्छ । साथै थकाई लाग्ने, हाई आउने, दृष्टी परिवर्तन हुने, हातखुट्टा झमझमाउने गर्दछ ।
माइग्रेन पेनमा ओमेगा ३ फ्याट्टी एसिड, म्याग्नेसियम तथा भिटामिन बी १२ को सेवन राम्रो मानिन्छ । साथै चिकित्सकको परामर्श अनिवार्य छ
पार्टी भित्रैबाट फेरि मागियो केपी ओलीको राजिनामा
भर्खरै आयो सारा देशबासीलाई रु’वाउने खबर!मन थामेर हेर्नुहोला
भर्खरै खुल्यो जागिर : राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ले माग्यो तत्काल ७ सय कर्मचारी (हेर्नुहोस् सूचना सहित)
यी पुरानो नेपाली पैसाको मुल्य अहिले लाख भन्दा पनि बढी छ कहाँ कसरि बेच्ने ? हेर्नुहोस यो भिडियोमा?
धर्ती माताले राजा र रवि लामिछानेबारे गरिन् यस्तो खुलासा, हेर्नुहोस् भिडियो